२ हजारको चेक साट्न २ घण्टा लाइनमा, नेबैलिमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई मर्का ! – ebaglung.com
२ हजारको चेक साट्न २ घण्टा लाइनमा, नेबैलिमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई मर्का !
२०७४ आश्विन ६, शुक्रबार २०:४४	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
बुर्तिबाङ, २०७४ असोज ६ । नेपाल बैंकको बुर्तिबाङ शाखामा कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । सामान्य एक चेक सटही गर्न पनि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुँदा टाढा टाढाबाट चेक सटहीको लागि आउने सेवाग्राहीहरुलाई निकै सास्ती भएको छ । चेक सटही गर्नका लागि विहान १० बजे कार्यालय खुलेदेखि नै लाइनमा बसे पनि दुई घण्टा लाइनमा पालो पर्खेर नबसेसम्म जो कसैले चेक सटही गर्न प्रायः सम्भव नै देखिदैन ।
शाखाका प्रमुख सुरज घिमिरे, सहायक प्रबन्धक गोविन्द थापा र खजान्ची रमेश पौडेल परीक्षा दिनका लागि विदामा बसेको कार्यालय स्रोतले बताएको छ । यता कार्यालयमा यतिबेला चाडपर्वको मुखमा एक जना खजान्ची सहबिन पौडेल मात्र चेक सटहीमा रहेकाले एक्लै काम गर्नका लागि निकै कठिन भएको छ । शाखा प्रमुख विदामा बसेपछि कुश्मा पर्वत शाखाबाट निमित्तको रुपमा विद्या पुन काजमा आएकी छन् । भर्खर मात्र आएकी उनलाई कार्यलयका अन्य कामहरु गर्नमा नै भ्याइ नभ्याइ छ ।
नेपाल बैंकको बुर्तिबाङ शाखामा निसी भुजी, तमान, रणसिंह किटेनी, जलजला लगायतका टाढा टाढाको दूरीबाट समेत चेक सटही गर्नका लागि मानिसहरु आउने गरेका छन् । अहिले शिक्षक कर्मचारीहरुको तलबभत्ता समेत स्थानीय निकायबाट निकासा भई यस क्षेत्रका विद्यालय एवं सरकारी कार्यालयहरुले नेपाल बैंकको यसै शाखाबाट भुक्तानी लिनुपर्ने भएकाले दंशै नजिकिदै जाँदै धेरै जसो शिक्षक कर्मचारीहरुको समेत कार्यालयमा घुइँचो लाग्ने गरेको छ । उता सर्वसाधारणलाई पनि चाडपर्व खर्चका लागि रकम चाहिने हुँदा दैनिक चेक सटहीमा भीडभाड बढ्दै गएको हो । अहिलेको प्रविधिको युगमा पनि सामान्य चेक सटही गर्न घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्थाले आफूहरुलाई निकै सास्ती भएको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।
कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएपछि चेक सटही बाहेक अन्य सेवा कार्यालयले दिन सकेको छैन । जसको कारण दैनिक ब्याज तिर्न आउने, सुन राख्न र झिक्न आउने, धितो राखी ऋणको कारोवार गर्न आउनेहरु समेत सेवा नलिई फर्किन बाध्य भएका छन् ।
अहिले बैंक शाखामा रकम समेत कम हुँदै गएपछि प्रति व्यक्ति एक पटकमा २ लाखको मात्र कार्यालयले चेक सटही गरेको छ । नेपाल बैंकका अन्य शाखाहरुले दंशैको बेला नयाँ नोट सटही गरिरहेको अवस्थामा यस शाखाले अझैसम्म नयाँ नोट समेत सटही गरिएको छैन ।
रेडियो परिवर्तन व्यवस्थित सञ्चार माध्यमका रुपमा स्थापित भएकोमा वक्ताहरुबाट प्रशंसा